ज्ञान विज्ञान Archives | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
Category: ज्ञान विज्ञान
दक्षिण कोरियाको दिग्गज टेक कम्पनी सामसङले आफ्नो ग्यालेक्सी एस२० सिरिज सार्वजनिक गरेको छ । सान फ्रान्सिस्कोमा आयोजित ग्यालेक्सी अनप्याक्ड इभेन्टमा तीन स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस२०, ग्यालेक्सी एस२० प्लस र ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा लञ्च गरिएको हो । यी तीनै फोन उत्कृष्ट क्यामरा, 8K रेकर्डिङ र 120Hz रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्लेसहित आउँछ । यी तीन फोनका अन्य विशेषताबारे जानकारी लिऔं । सामसङ ग्यालेक्सी एस२० का विशेषताः फोनमा ६.२ इन्चको क्वाड एचडी+ डाइनामिक AMOLED 2x डिस्प्ले दिइएको छ । फूल एचडी रिजोलुशन भएको यो फोन 120Hz को रिफ्रेश रेटसहित आउँछ । फोनको डिस्प्ले HDR10+…
ज्ञान विज्ञानLeaveacomment
श्रीमान-श्रीमतीको जीवन यात्रा सजिलो होस् भन्नाका लागि एक-अर्कालाई सम्झन् र बुझ्न आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीँ बढ्दो जिम्मेवारी र जीवनमा आईपर्ने विभिन्न समस्याहरुका कारणले गर्दा श्रीमानले पारिवारिक जीवनमा सही तालमेल राख्न सक्दैनन् । जसकारण उनीहरुको व्यवहार परिवर्तन भैरहने तथा चिडचिडापना आउन थाल्छ । त्यस्तो अवस्थामा श्रीमतीले नै श्रीमानसंग सामञ्जस्य बनाएर दाम्पत्य जीवनको गाडीलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्छिन् । यदि तपाइर्ंको श्रीमान्को व्यवहारमा परिर्वतन हुन थालेको छ भने के गर्ने ? श्रीमानको सहयोग लिनुपर्छ श्रीमानलाई हरेक कुरामा महत्व दिनु पर्छ । वैवाहिक जीवनसंग जोडिएका समस्याहरुमा उनको सल्लाह लिनु अति नै आवश्यक हुन्छ…
गर्भवस्थामा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । शरीर दुख्ने, अल्छि लाग्ने खान मन नलाग्ने, स्वाँ-स्वाँ हुने जस्ता सामान्य समस्याहरु हुन्छन्, जुन बच्चा जन्मेपछि आफैं कम भएर जान्छ । तर, यदि गर्भवस्थामा अन्य कुनै रोगका संकेतहरु देखियो भने यसले आमा र बच्चा दुवैलाई हानी पुर्याउन सक्छ । गर्भवस्थामा देखिने विभिन्न रोगहरु मध्ये थाइराइड पनि एक हो । हिजोआज थाइराइड सामान्य रोग भैसकेको छ । जसरी सुगर र ग्यास्टि्रक रोगलाई सामान्य मानिन्छ, अहिले थाइराइडलाई पनि सामान्य रोग नै मान्न थालिएको छ । यो रोग हिजोआज प्रायः व्यक्तिमा देखिने भएको कारणले पनि यसलाई सामान्य…
ज्ञान विज्ञानगर्भवस्थामा थाइराइडको स्क्रिनिङ कतिको आवश्यक ?Leaveacomment
जापानको एक बौद्ध मन्दिरमा रोबोट पुजारी छ। यसले मानिसलाई करुणाको बारेमा शिक्षा दिन्छ। यस रोबोटले मन्दिर आउने श्रद्धालुहरूलाई माया, करुणासँगै रिस, अहंकारजस्तो नराम्रो कुराबाट टाढा रहने शिक्षा प्रदान गर्छ। जापानको उक्त बौद्ध मन्दिर चार सय वर्ष पुरानो छ। मन्दिरमा रहेका अन्य पुजारीहरूले रोबोटलाई मद्दत गर्छन्। कृत्रिम बौद्धिकताद्वारा आउने दिनमा रोबोट अझै धेरै बुद्धिमान हुने विश्वास त्यहाँका पुजारीहरूलाई छ। मन्दिरका पुजारीका अनुसार यो रोबोटले समयसँगै आफूलाई सुधार र अपडेट गर्दै लैजानेछ। परिवर्तित बौद्ध धर्मअनुसार यसले लगातार आफ्नो ज्ञानमा वृद्धि गर्नेछ र सधैं समयसँगै चल्नेछ। यो रोबोट एउटा युवाको आकारमा छ। यसको…
ज्ञान विज्ञानरोबोट पुजारीLeaveacomment
फोनबाट फोनभन्दा बढी अपेक्षा पूरा गर्ने फोनको रुपमा बजारमा आएको छ, नोट । सामसङको ग्यालेक्सीले भर्खरै नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेर नोटलाई अर्को स्तरमा पुर्याएको छ । दक्षिण कोरियाली स्मार्टफोन निर्माता सामसङले सार्वजनिक गरेका नोट १० र नोट १० प्लस को विशेषता आश्चर्य तुल्याउने छन् । वा भनौं, स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि नोटले नयाँ परिवर्तन ल्याएको छ । कसरी ? एस पेनले ह्यान्डराइटिङलाई टेक्स्टमा बदल्छ । यसमा ब्लुटुथ प्रयोग गरी रिमोट कन्ट्रोल झैं बनाउन सकिन्छ । मल्टि क्यामेरा प्रणालीले मुभि प्रविधिलाई मोबाइलमा ल्याएको मात्र छैन, प्रयोग सरल पनि बनाएको छ । पहिलोपटक…
ज्ञान विज्ञानफोनभन्दा बढीको अपेक्षा पूरा गर्ने नोट १० र १० प्लस (भिडियोसहित)Leaveacomment
बन्द हुने अवस्थामा ३०० क्याम्पस
January 14, 2019 Nepal E News
पौष ३०, काठमाडौं । बन्द हुने अवस्थामा ३०० क्याम्पस देशभर सञ्चालित ५३२ सामुदायिक क्याम्पसमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन्। तथ्यांकअनुसार झन्डै ३०० क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा रहेका हुन्। ती क्याम्पसमा ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशन प्रतिवेदन २०७५’ अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्ता क्याम्पसलाई तत्काल बन्द गर्न वा मर्ज गर्न सुझाव दिएको छ। विश्वद्यालयले मनपरी रूपमा क्याम्पस सम्बन्धन दिएको कारण ती क्याम्पसहरुको अवस्था धराशयी बन्दै गएको संयोजक एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्राडा देवराज अर्यालले…
ज्ञान विज्ञानबन्द हुने अवस्थामा ३०० क्याम्पसLeaveacomment
पौष ४, काठमाडौं । अब शिक्षकले राजनीति गरे जागिर चट् सरकारले विद्यालयमा राजनीति गरे शिक्षकको जागिर नै चट् हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसअघि विभिन्न राजनितिक दलको सिफारिसमा शिक्षामन्त्री बन्न पुगेका नेताले विद्यालयमा राजनीति गर्न नहुने बताउदै आएपनि त्यो विषय कार्यान्वन हुन सकेको थिएन। सरकारले अब कानुन नै बनाएर विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले अब उप्रान्त कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्य तथा समिति पदाधिकारी हुन नपाउने, भएमा शिक्षक पद बाँकी नरहने कानुनी ब्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। उक्त…
ज्ञान विज्ञानअब शिक्षकले राजनीति गरे जागिर चट्Leaveacomment
काठमाडौ : नक्सा बिर्सिदा दुबई–काठमाडौँ उडान चार घन्टा ढिलो नेपाल वायुसेवा निगमको आइतबार विहानको दुवई–काठमाडौं उडान ४ घण्टा ढिलो हुँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहकप्रति आत्मीयता राख्ने यात्रूकै विचल्ली भएको छ । दुवईको स्थानीय समयअनुसार विहान ४ बजे उडान भरी ९ : ४० मा काठमाडौँमा अवतरण गर्नुपर्ने थियो तर निगमको लापरवाहीका कारण विमान १ बजेर ४३ मिनेटमा मात्र काठमाडौं ओर्लिएको थियो । हवाई उडानको मार्ग पहिल्याउन तथा उचाइ थाहा पाउन आवश्यक पर्ने नक्सा (जिप्सन चार्ट) काठमाडौँबाटै लैजान बिर्सिएकाले तोकिएको समयभन्दा ४ घण्टापछि उडान भएको हो ।उक्त विमानबाट यात्रारत एक यात्रुका अनुसार निगमको केन्द्रीय…
ज्ञान विज्ञाननक्सा बिर्सिदा दुबई–काठमाडौँ उडान चार घन्टा ढिलोLeaveacomment
काठमाडौं । बजारमा नयाँ टाटा टिगोर, यस्तो छ बिशेषताहरु टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले नेपाली बजारमा अर्को एउटा आकर्षक प्यासेन्जर गाडी, नयाँ टाटा टिगोर ल्याएको छ । मनमोहक बाहिरी र भित्री बनावट भएको टाटा टिगोर पेट्रोल बाट चल्ने सेडानको न्युनतम २७.५५ लाख (१.२ लि. रेभोट्रन) मूल्य पर्नेछ र टाटाका सबै आधिकारिक विक्री केन्द्रहरुमा उपलब्ध हुनेछ । टाटा मोटर्सका इन्टरनेसनल प्यासेन्जर युनिटका प्रमुख सुजन रोय भन्नुहुन्छ “सही मूल्यमा बोल्ड, आकर्षक वनावट र उपयुक्त प्रिमियम खोज्ने ग्राहकहरुका बिच कम्प्याक्ट सेडान निकै लोकप्रिय छ । यही तथ्यलाइ ध्यानमा राख्दै…
ज्ञान विज्ञानबजारमा नयाँ टाटा टिगोर, यस्तो छ बिशेषताहरुLeaveacomment
गाउँमै बिभिन्न खालका घातक रोगको उपचार हुने भएपछि स्थानीयहरु खुसी
September 13, 2018 September 13, 2018 Nepal E News
गाउँमै बिभिन्न खालका घातक रोगको उपचार हुने भएपछि स्थानीयहरु खुसी शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले बुधबारबाट अत्याधुनिक सि.टी.स्क्यान तथा क्याथ ल्याब सेवा शुरु गरेको छ । मुटु सम्बन्धि रोगका लागि बिरामीहरु उपचार गर्न शहीद गंगालाल अस्पताल बाँसवारी काठमाडौ पुग्नु पर्ने बध्यता थियो । तर, अब मुटु सम्बन्धि अति आवश्यक सम्पूर्ण सेवा बुधबारबाट शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा शुरु भएको छ । यो सेवा बिस्तार सँगै भक्तपुर लगाएत भक्तपुर पूर्वका जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाम, दोलखाका बिरामीहरुलाई सेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यो अत्याधुनिक प्रविधिबाट मुटु सम्वन्धि धेरै जटिल रोगहरुको…
ज्ञान विज्ञानगाउँमै बिभिन्न खालका घातक रोगको उपचार हुने भएपछि स्थानीयहरु खुसीLeaveacomment